निःशुल्क भोजन अभियानलाई सहयोग « Mechipost.com
निःशुल्क भोजन अभियानलाई सहयोग
प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०७८, बुधबार २१:३०
फिदिम, २६ जेठ । कोभिड अस्पतालमा उपचाररत कोभिड–१९ का सङ्क्रमितलाई लक्षित गरी जिल्ला अस्पताल परिसरमा सञ्चालित निःशुल्क भोजन वितरण अभियानलाई विभिन्न निकायले सहयोग गरेका छन् ।
फ्रेन्ड्स फरएभर फिदिमले सञ्चालन गरेको अभियानलाई समृद्ध पाँचथरका अध्यक्ष भूमिका सुब्बा र फिदिमको हातेमालो कृषि सहकारी संस्थाले सहयोग गरेका हुन् । अभियानलाई सुब्बाले रु. १० हजार तथा सहकारीले रु. पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुभएको हो । आज वितरण स्थलमै पुगी उहाँहरुले उक्त रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । सङ्क्रमित तथा तिनका आफन्तले समस्या भोग्नु नपर्ने गरी फ्रेन्ड्स फरएभर फिदिमले भोजन वितरण गरेको भन्दै सुब्बाले खुशी ब्यक्त गर्नुभयो ।
सो क्रममा उक्त अभियानबारे फ्रेन्ड्स फरएभरमा समेत आवद्ध पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दीपक नेपालले जानकारी गराउनुभएको थियो । नेपाल सहित सन्तोष मोक्तान, रचना पराजुली, होम थापा, उमेश शाह लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आवद्ध ब्यक्तित्वहरुले निःशुल्क भोजन वितरणको कार्य अगाडि बढाउनुभएको हो ।
समाजसेवी सुब्बाले फिदिम–४ जोरसालका स्थानीय भगीरथ सापकोटाको निधनपछि काजकृयाका क्रममा आगलागी भई उहाँका श्रीमती तनमाया समेतको उपचारका क्रममा निधन भएको र छोराहरु उपचारमा रहेका घटनावारे घरमै पुगेर बुझी राहत स्वरुप रु. पाँच हजार सहयोग उपलब्ध गराउनुभएको छ ।
यस्तै जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै काठमाण्डौँमा रहेका पाँचथरेलीलाई सहयोग गर्दै आएको पाँचथर समाज, काठमाण्डौँलाई समृद्ध पाँचथरले रु. २५ हजार उपलब्ध गराउने भएको समृद्ध पाँचथरका उपाध्यक्ष सूर्यकुमार निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।